hadii aan jaceyl jirin dadku jaar may ahaadeen | Just another WordPress.com weblog
hadii aan jaceyl jirin dadku jaar may ahaadeen
Dhibaatada jacaylka . November 28, 2009
Filed under: Uncategorized — jacayl @ 5:52 pm
dhibaatada jacaylku maaha mid dhamaata halka farxada jacaylku aanay ahayn mid dhamaata weligeed laakiin waxaa jirta dhib joogto ah oo uu jacaylku leeyahay taas oo ah welwel welbahaar hami badan murgo iyo tiiraanyo.
waxay sheegaan dadka wax jecel in ay iyagu ugu naxdin badan yihiin dadka dunidan ku nool waayo waxay mar walba niyada ku hayaan oo ay is leeyihiin ma ku dhaafay lamaanahaagii aad nolosha la qaybsan lahayd halka qofka aan jacaylku helin jecelyahay ka fekerka noloshiisa oo keliya
runtii jacaylku wuu dhibaatooyin badan yahay laakiin waxaan isku dayeyaa in aan ka faaloodo dhibta joogtada ah ee uu leeyahay jacaylka dhabta ah kaas oo dad badan oo dunida ku nooli dareemaan hadh iyo habeen.
* waxaa jira dhibaato joogto ah oo uu leeyahay jacaylku waxaana ka mdi ah welbehaar joogto ah, waxaa dhacda in marka aad qof si toos ah aad u jeclaatid mar walba ku fekertid la kulankeeda iyo in aad la sheekasyatid laakiin marka ay kaa soo hor baxdo qoftii ama qofkii aad jeclayd waxaad dareemaysaa welwel, welwelkaas oo aan ahayn mid kaa keenaya ilin ama mid wejigaaga ka muuqanaya oo dadka oo dhan dareemayaan runtii welwelka ku qabanayaa waa mid wadnaha iyo qaarka sare ee jidhkaaguun ku kooban marka se ay ku dhaafto waxaad is odhaneysaa yaa mar labaad kula kulan siiya, sidoo kale marka aad qof si xad dhaaf ah u jeclaatid waxaad mar walba ku fekeraysaa sidii aad jacaylkaaga ugu sheegan lahayd laakiin waxaa hubaal ah in aad ka fursan weydo qof aad ogeysiiso sida saaxiibkaa ama qofka markaa kuugu dhaw
waxaad ahayd markii hore mid wax walba keligii qabsada laakiin maanta talada iyo go aankaba qofka kuugu dhaw ayaad gacanta u saartay hadii uu ku yidhaahdo ka joog ma iska daa waad ka xumaaneysaa adiga oo aan deyneyn ayaad misana qofkii talo weydiisaneysaa hadab mar qudha ma is tidhi dhibtaa joogtada ah ilaa aad nolol la wadaagto aan ku deynayn ma is weydiisay ileen jacaylka dhabta ah waxaad ku garaneysaa marka aad qofka aad jeceshahay sawirkiisa aragtid ama uu kuu yimaado welwel iyo dhidib badan iyo hadalka oo iskaga kaa daadsama oo aad laba xaraf isku keeni weyday
rutnii jacaylku wuxuu leeyahay xanuun joogto ah oo dad badan dareensan yihiin qaarkoodna uu u dhiman yahay laakiin dhibta jacaylka oo dhan waxaa duudka u ritay oo qofka welwelka iyo welbahaarka ka biinayaa waa kelamda ah waan ku jeclahay waayo culimada jacaylku waxay sheegeen in kelmadaasi dhamaan unug yada jidhka oo dhan ay u qoyso sida roobku u qooyo una biyo dhigo dhulka wuxuun dareenka qofka binu aadanka ah nooleeyaa oo farxad iyo raynrayn geliyaa muddo saddex maalimood ah ka dib maalintii kelmadaa la yidhi waayo waxay mar walba waan ku jecalahay ku soo laa laabataa maskaxdiisa 100 jeer.
qofka aad jeceshahay marka uu ku hor yimaado wuxuu qalbigaagu odhanayaa dhug dhug dhug taas oo ay micnaheedu tahay alaw yaa nolosha igu kaa sima,waa layaab ee hadii ayu soomaali nahanay ma jiraa qof jacayl toos ah ku dhacay oo is leh jacaylka ku soo maray nolosha dadka wax ayuuu ka bedelayaa qof walba oo aan jacaylka aqoonina wuxuu u noqonayaa indho u furma.
waa qalinkii :Nuuradiin Xareed Cismaan (waxgarad)
Jacaylku ma dhab baa mise waa dhalanteed ? November 25, 2009
Filed under: Uncategorized — jacayl @ 10:19 am
Kolkaad haween dhoola-cadaynaysa aragtid ayaad waxaad iska dhaa-dhacsii inay iyada tahay, weliba iyadoo ku leh:“Gacaliye, maxaad qabaneysaa galabta” Degdeg intaad u soo haado ayaad tiraahdaa “Gacaliso, waxba ma qabanayo, halkaan ayaan u soo nasasho tagay, ee xaggeen aadnaa” goortay ku dhaaftay maba garatid, qof kula hadlayay iyadaba ma’ahayn waa niyadaadii oo isla hadlaysay ee KA BUL-DHEH……Sidaas ayaad ku garataa inuu Jaceylka dhab yahay, cudur xun ee aan daawo laheyn yahay ee kuwaan aamisneyn, waa kuwa habeen weliba telefonka ku calaacala, oo nafsadoodii qiyaamay. Kolkey goobaha dhalinta ku kulmaan aragtid ayay yiraahdaan saaxiib anigu ma aaminsani jaceylka inuu dhab yahay oo uu jiraba.
Qlinkii:- nuuradiin xareed cismaan(waxgarad)
su’aal: horta waa maxay jacaylku?!
Filed under: Uncategorized — jacayl @ 10:06 am
Jacayl hadallo badan baa horee loogu tiriye oo ay abawaanadu ka heeseen* Anigaa se helay oo hubsaday oo wuxuu yahay, haybad iyo qurux intay is hor yimaadeen oo howlo qaaday ee hadba aniga meel ha ii galo” (Axmed Mooge )
Wax badan ayeynu maqlay heeso badan oo ay fanaaniintu jacayl ku sifaynayaan ama kaga hadlayaan. Su’aal ayaa is waydiin leh. Horta jacaylku waa maxay?
Jacaylku noocyo badan ayuu leeyahay oo uu haddana yahay dareen meel ku wada yaal oo geed ka wada baxay. Jacayl wuu soo jiray ilaa bilowgii nolosha Aadmiga. Ka bilow Aadan iyo Xaawa. Illaa iyo maantana laga cawdaa ama waa waaba dareen uu qofkastaaba wax kala kulmo, xumaan iyo wanaagba.
Jawaabo kala duwan ayaa laga bixiyey jacaylka. Nin gantaal buu ku sheegay. Nin dhibaato ayuu ku sheegay. Nin kale cadaawye ama cudur ayuu ku sheegay.
Way badan yihiin sifaha lugu sifeeyay iyo sida loo sheegay jacaylka. Waxaannu odhan karnaa jacayl waaba magacyo badan yahay. Anigu waxaan ka helay nin hees ku sifeeyey oo yidhi:-
“Jacayl hadalo badan baa hore loogu tiriye oo ay abawaanadu ka heeseen. Anigaa se helay oo hubsaday oo wuxuu yahay. Haybad iyo qurux intay is hor yimaadeen oo howlo qaadaye hadba meel ha ii galo”!. Heestaas oo uu qaadi jiray Axmed Mooge ( AHNX ). Waa hees aad u sifaysay jacaylka.
Aniguna axa an leeyahay, “Jacayl waa jac iyo ciil”!
Kolay Qeexidda Jacaylka ninba si ayuu u arkaa ee tani se waa mid laga siman yahay.
La soco Qormadda danbe.
Waa qalinkii nuuradiin xareed cismaan (waxgarad)\_
Filed under: Uncategorized — jacayl @ 7:38 am